निन्द्रा नलागेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् अनिन्द्राबाट बच्ने उपाय - kageshworikhabar.com
निद्रा हामी सबैका लागि अपरिहार्य भए पनि कहिलेकाहीँ हामी निदाउन सक्देनौं। अहिले मान्छेहरुमा निद्रा नलाग्ने समस्या निकै बढेको छ।
निद्रा नलाग्नुका थुप्रै कारण भए पनि यो आफैंमा एउटा रोग पनि हो, जसलाई इन्सोम्निया भनिन्छ। यस्ता छन निद्रा नलाग्नुका कारण :
१) डिप्रेसन : डिप्रेसन हुँदा पनि हामीलाई निद्रा लाग्दैन। दिक्क लाग्ने, निराश हुने ,मनमा कुरा खेल्ने हुँदा यसले झनै दिमाग सक्रिय हुन्छ। अनि त सुत्न खोजे पनि निद्रा आउँदैन।
२) रक्सीको लत : रक्सीको लत लागेका मानिसहरुलाई छोड्नुस् भन्यो भने नखाई त निद्रै लाग्दैन भन्छन्। यहाँ उनीहरुले के बुझ्दैन भने उसलाई पहिलादेखि नै मानसिक समस्या छन्। रक्सी नखाई नहुनु पनि मानसिक समस्या नै हो।
रक्सी खाएर निदाउने बानी परेकाको नशा उत्रिन साथ निद्रा पनि उत्रिन्छ। निदाउने सहारा मान्दै आएको रक्सीले नै उसको निद्रा बिगार्दै गइरहेको उसले पत्तो पाउँदैन।
३) उठ्ने र सुत्ने समयको टुंगो नभएमा : मान्छेको जीवनशैलीले पनि अनिद्रा समस्या बढाएको छ। दैनिक ढिलो सुताई र चाँडो उठाईले उनीहरुको शारिरीक र मानसिक समस्या बढाउँदै लैजान्छ र झनै अनिद्रा बढाउँछ। त्यसैले जीवनशैली र निद्राको सम्बन्ध गहिरो छ।
४) घुर्ने बानी : घुर्ने बानी भएका मानिसहरुको रगतमा अक्सिजनको मात्रा घट्छ र कार्वनडाइअक्साइडको मात्रा बढ्छ । त्यसले गर्दा मानिसहरु धेरै ब्युँझिरहेने हुन्छ। तर उसलाई थाहा हुँदैन । यस्तो अवस्थालाई ‘स्लिप एप्निया सिन्ड्रोम’ भनिन्छ ।
५) हर्मोन : हर्मोनका कारण पनि धेरै निदाउने वा निदाउन नसक्ने हुन सक्छ ।
निद्रा लाग्ने उपायहरु :
सुत्ने र उठ्ने समय नियमित बनाउने।
नियमित व्यायाम गर्ने ।
स्वस्थ आहार लिने ।
धूमपान, मध्यपान र लागूपदार्थको सेवन नगर्ने ।
मोटोपन घटाउने ।
दिउँसो सुत्ने बानी हटाउने ।
बेलुकी खाना खाइसकेपछि कम्तिमा दुई घण्टा आराम गरेर मात्र सुत्ने ।
घुर्ने समस्या भएकाहरुले उत्तानो परेर नसुत्ने । दायाँ कि बाँयातिर कोल्टे परेर सुत्ने ।
आफूलाई सहज हुनेगरी सुत्ने र उठ्ने समय सँधै एउटै बनाउने ।
सुत्ने बेला वा राति उठेर पानी खाने बानी छ भने त्यसलाई कम गर्ने ।
Previous articleआयोगले माघ १५ गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने
Next articleकोटेश्वर–जडीबुटी सडक बिस्तार अघि बढ्यो
मंगलबारका दिन के गर्दा शुभ मानिन्छ ? यसो गर्नुहोस् सधैँ मिल्छ भगवान गणेशको कृपा !